Telefónica inodzokera kunzvimbo dzekutenga | Ehupfumi Zvemari
Telefónica inodzokera kunzvimbo dzekutenga
Iyo yenyika telecom Telefónica ndiyo kukosha kuri parizvino kudhonza indekisi yekusarudza yenyika equity, Ibex 35, mushure memwedzi yakawanda yekusava nechokwadi kana kunyangwe iine kurasikirwa kukuru mumutengo wayo. Iwe uri parizvino nhanho padyo ne7,60 euros chiito ichi, kunyangwe chakakosha chinhu kuziva kana ichizokwanisa kupfuudza chiyero chekutsigira chainacho pa8 euros. Kana izvi zviri izvo, hapana mubvunzo kuti kugona kwayo kwepamusoro kuchave kwakavandudza zvakanyanya.
Parizvino, chikamu chakanaka chevanoongorora zvemari chakamirira izvo izvo teleco inogona kuita mumisika yemari. Kwete zvisina maturo, kusvikira mavhiki mashoma apfuura akanyudzwa mune inoshungurudza bearish chiteshi iyo yakatungamira kuti ive pasi pemanomwe euros. Mune imwe ye yakaderera mipiro mazinga yenguva dzekupedzisira. Hatigone kukanganwa, kune rumwe rutivi, kuti zvikamu zvaro zvave zvichitengesa kuma13 euros makore mashoma apfuura. Mune mamwe mazwi, yakarasika ingangoita hafu yekukosha kwayo pamusika wemasheya.
Semhedzisiro yekushanduka kwayo mumisika yezvemari, kunetsekana kune chikamu chevamiriri vemari dzakasiyana hakushamisi. Zvichipa kutya kuri pachena kuti inogona kudonha zvakanyanya mumitengo yayo yoenda kunhanho ye6 euros, izvo zvaizoreva kupinda muchimiro chehunyanzvi che dzinza rakasununguka. Iyo nhamba ndiyo yakaipa kwazvo inogona kupihwa kune vadiki nepakati varimi. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti haisisina tsigiro dzakakodzera munzira yayo uye kurasikirwa kunogona kudzika nekusimba kwakasimba.
1 Runhare. Nhau dzakanaka uye nhau dzakanaka
2 Kubatana neNetflix
3 Maitiro ekutengesa kukosha
4 Vashandi vane chimiro chekuchengetedza
5 Enterprise Solutions
6 Kuburitswa kwekutanga green green bond
Runhare. Nhau dzakanaka uye nhau dzakanaka
Mushure memwedzi yakawanda musina kuburitsa nhau dzakanaka kuti musimudzire mutengo wayo pamusika wemasheya, zvinoita sekunge chimiro chakadzoserwa mumazuva apfuura. Nekuti zvirokwazvo, Telefonica Moviles anga ari iye akahwina zvipo zvina zvakapihwa chibvumirano neSocial Security IT Management, sekureva kwechiziviso chakaburitswa munguva pfupi yapfuura muHurumende State Gazette (BOE). Chero zvazvingaitika, chibvumirano chine chinguva chegore rimwe chete, icho chinotanga kubva Zvita 1, 2018 kusvika Mbudzi 30, 2019. Chero zvazvingaitika, inogona kumutsiridzwa kune rimwe gore, iine nguva yakareba, kusanganisira kuwedzerwa, makore maviri.
Izvo, muchidimbu, yakanaka kwazvo nhau inogona kupa kukurudzira kune chinzvimbo cheiyi telecom mune yenyika equity index. Mushure memwedzi yakawanda muhusimbe hwese uye izvo zvave kuita vazhinji vadiki nepakati varimi ndasiya ushingi. Kusarudza vamwe vane tarisiro dziri nani pamusika wemusika. Semuenzaniso, makambani ari muchikamu chemagetsi kana kunyange mamwe makambani ekuvaka akakosha zvakanyanya mumisika yemari. Iine pachena kuvapo kwenzvimbo pfupi pamusoro pevatengi.
Imwe nyaya yakanaka inogona kubatsira Telefónica kuve mumwe wevanomiririra akanakisa emabhizimusi eSpain mubatanidzwa wayo neimwe yemahombe ebazi rekutaurirana senge anoshanda weNetflix. Hazvishamisi kuti pakupera kwegore rapfuura, iyo Movistar's nyowani Merger modalities iyo yaisanganisira zvirimo zveNetflix muHD kana UHD mhando.
Mwedzi miviri mushure mekutanga kwekushambadzira kwemubatanidzwa pakati peMovistar neNetflix kuSpain, zviverengero zvinoratidza kuti inopfuura chetatu chevatengi vatsva vaMovistar vakapinda mukambani kuhaya Netflix mupakeji yako. Saizvozvo, 35% yevatengi veMovistar vane mukana wezvigadzirwa zvinobvumidza Netflix kutarisa vakatora iyi sarudzo.
Kubatanidzwa kweNetflix muMovistar + interface kwakapa chiitiko chitsva kumushandisi, uyo anokwanisa kuwana chikuva ichi zvese muzvikamu zvakasiyana zveiyo interface uye kuburikidza neinjini yekutsvaga.
Maitiro ekutengesa kukosha
Chero zvazvingaitika, imwe nzira inogona kuitiswa neiyi kukosha. Imwe yeakanyanya kukosha ndeyekuvhura nzvimbo kuitira kuti zvikamu zvako zvipfuure zvinhanho zveeuro e8 Pasina kufungidzira njodzi dzakawandisa uye izvo zvinogona kupihwa kwakasiyana mazwi ekugara: pfupi, yepakati nepakati. Mukati meichi chirevo chizere, uyu mutengo ndiyo kiyi yekupinda kana kusapinda mumisika yemari. Nepo pane izvo zvinopesana, kana chipingamupinyi chemamiriyoni manomwe emadhora chadzorerwa, chichava chiri kupa mutsva chiratidzo weutera mukukosha. Uye izvo zvinogona kukutora iwe kunyangwe kudzikisa nhanho uye izvo zvinokukoka iwe kuti urege nzvimbo dzako.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti Telefónica ndeimwe yeiyo zvitema machipisi kubva kumusika wemusika wenyika. Mune mamwe mazwi, avo vane huwandu hukuru hwezvibvumirano uye nekutsinhana kwekuchengetedzeka munzvimbo dzese dzekutengesa. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Kuva, muchidimbu, chimwe chezvinhu zvinonyanya kushanda, kwete chete pamusika weSpanish wemusika asiwo kukondinendi yekare. Chinhu chinogona kukubatsira iwe kukwira zvinzvimbo mukati mekusimudzira misika yemari yepasirese.
Vashandi vane chimiro chekuchengetedza
Chimwe chiitiko chinosiyanisa iyi yakakosha yemusika wemari kukosha ndeyekuti inyaya yevanonyanya kuzvidzivirira kana vanochengetedza mari mumusika. Iko kune zvaunoda chengetedza mari pamusoro pezvimwe zvinotyisa kufunga kubva pane ese maonero maonero. Mupfungwa iyi, hatigone kukanganwa kuti muterevhizheni anogovera mugove gore rega riine purofiti inosvika 5,5%. Kuburikidza nemabhadhariro maviri akaitwa mugore rimwe chete uye izvo zvinoita kuti ive imwe yemigove inobatsira kwazvo yeIbex 35.
Ukuwo, zvakare haisi kukosha kwakanyanyisa kusimba sezvo kukwira nekudzika kwayo munzvimbo dzekutengesa dzisina mhirizhonga zvakanyanya zvichienzaniswa nemamwe masheya. Semuenzaniso, iwo emubhengi chikamu mumwedzi ichangopfuura. Iine zvikamu zviri padyo zvakanyanya ne3% kana 4% uye izvo zvinogona kuwana mari yakawanda mukushanda kana kurasikirwa nazvo kana mamiriro acho asina kunaka kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Kunyangwe iko kuderera kweiyi inoenderana nharembozha inopfuura 50% mumakore manomwe apfuura.
Icho chinhu chinofanirwa kutariswa kupinza mamwe marongero mune ako mashandiro. Ose ari maviri kutenga nekutengesa. Mune yekupedzisira kesi kuburikidza ne Kiredhiti kutengesa iyo inobvumidza kuwana mabhenefiti mune kukosha kune kudonha. Kunyangwe chiri chigadzirwa chemari chinotakura njodzi dzakawanda uye chisina kuchinjirwa kune ese ma profiles evashambadzi vadiki nepakati. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinoda hurefu hwekudzidza mumabasa ayo.
Telefónica Spain yanga ichitarisa mukusimbisa iyo nyanzvi dzebhizinesi zvikamu mune yega yeaya matekinoroji (kubatanidza, gore, chengetedzo, dhata hombe, IoT nenzvimbo yedhijitari yebasa), izvo mumakore achangopfuura zvakave nenzira yekuramba ichikura, ichiisa Telefónica semumwe wevatambi vanotungamira mumusika wetekinoroji nyowani dzemakambani.
“Ne 'Telefónica Empresas', vanamuzvinabhizimusi vachakwanisa kuwana zvese kugona, masevhisi uye mhinduro dze akasiyana bhizimusi zvikamu kubva kumakambani akasiyana, kuburikidza nechipo chakazara chekutengeserana kumakambani makuru uye eayo epakati nepadiki saizi, pamwe nehuruzhinji. 'Telefónica Empresas' inoda kuve shamwari inovimbwa nayo kuita shanduko yedhijitari yemabhizimusi panguva iyo digitization yatove yechokwadi uye kukosha kuti irambe ichikura ", akawedzera José Cerdán, CEO weTelefonica Business Solutions.
Kuburitswa kwekutanga green green bond
Telefónica yakabudirira kuburitsa yayo yekutanga green green nhasi, yehuwandu hwemamirioni chiuru euros uye mukati memakore mashanu. Basa iri, rinovawo rekutanga kuitwa muchikamu chezvekufambiswa kwemashoko, rinotevera ratidziro kumusika wegadziriro yemari inogara iripo yekambani iyi. Iyo zvakare iri yekutanga nyaya yekambani yeSpanish mu2019. Kuburikidza nenjodzi itsva yekudyara iyo yanga isingazivikanwe nevatengesi vazhinji.
Iko mashandiro akagamuchirwa kwazvo nevashambadzi vemasangano, vane kudiwa kwakabvumidza coupon kuiswa pa1,069%, inosvika makumi maviri neshanu mapoinzi pazasi pekutanga kwemitengo. Iyo yekupedzisira premium yakabhadharwa ingori matatu hwaro mapoinzi, zvakanyanya pazasi peavhareji emweya egore. Bhuku rekupedzisira rekuodha rakamira pamabhiriyoni mashanu nezviuru, zvichimiririra kunyorwa kweanopfuura ka25. Izvo zvakakodzera kuti iratidze kufarira kwakakwira kwevatema vegirini, nekutora chikamu chinopfuura makumi mashanu muzana, izvo zvinobatsira mukuwedzera hwaro hwevatengesi. Pakazara, vanopfuura mazana matatu nemakumi masere vatengesi vakatora chikamu, icho chinopfuura makumi masere muzana vatengesi vepasi rese Iyo zvakare iri yekutanga nyaya yekambani yeSpanish mu3. Kubudikidza neiyo nyowani yekudyara nzira yaive isingazivikanwe nenhamba huru yevatengesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Telefónica inodzokera kunzvimbo dzekutenga
Iyo Ibex inodarika mapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matatu: ndeapi maseru ekupinda?